मंगलबार, कार्तिक २, २०७८ ०८:०९:३९ युनिकोड
पछिल्लो डेढ दुई बर्ष नेपाली राजनीति प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शासन सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका क्रममा विधि र पद्दति मिचेर मन लाग्दी गर्ने प्रवृतिको जाँतोमा देश नराम्ररी फसेको सबैलाई जगजाहेरै छ । त्यही घन चक्करका दुष्परिणामहरु के कस्ता आए, त्यो पनि सबैलाई थाहै छ । दुई तिहाइको सरकार, स्थायी सरकार, कम्युनिष्ट एकता, जनतामा जागृत विकास र गरिबीबाट मूक्तिका सपनाहरु तुहिनुका पछाडीको मुख्य कारण नेतृत्व तह जनउत्तरदायी नहुनु तथा विधि र पद्दति मिच्ने प्रवृति मौलाउनुका परिणामहरु हुन् ।
केन्द्रिय तहमा सरकार र पार्टी सञ्चालकको मनमौजी गर्ने प्रवृतिका विरुद्ध संघर्ष चलेको लामै समय भइ सक्यो । यो आलेख तयार गर्दासम्म एमालेको एकता अझै टुंगोमा पुगिनसकेकोले आगामी दिनको राजनीतिक कोर्ष कसरी बढ्ला, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर यस अवधिमा विधि र पद्दति नमान्ने अनि जनउत्तरदायी शासन सञ्चालन प्रति गैर जिम्मेवार हुने प्रवृतिका कारण जनताले भने अपुरणीय क्षति ब्यहोर्नु पर्यो ।जनताका समृद्धिका सपनाहरु निराशामा परिणत भएकै हुन् । कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिको जनविश्वासमा गम्भिर चोट लागेकै हो । तर बलवान समय र नेतृत्वको सुबुद्धिले जनताका मूर्छित सपनाहरु पुनः जागृत हुँदै हुदैनन् भन्ने पनि हुदैन ।
केन्द्र सरकारको कुरा गर्दै गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुका निर्णय, गतिविधि, जनअपेक्षा र परिणामहरु प्रति उनीहरुको जवाफदेहिताको सवालमा पनि सोही प्रकारले समिक्षा गर्नै पर्छ । त्यसैले अब हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालकहरुको काम कारवाही, नीति, विधि र ब्यवहार तथा परिणामहरुको पनि गम्भिर समिक्षा अपरिहार्य छ र त्यसमा कत्ति पनि ढिलो गर्नु हुन्न ।
तल माथि भएन भने ०७४ फागुन ५ गते गठित माननीय त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकार अहिलेको अवस्थामा बलियै छ । भट्ट सरकारका केही मन्त्री यो बीचमा फेरिए, एक जना दोहोरिए पनि । तर सरकार प्राविधिक रुपमा बलियो या कमजोर छ भन्दा पनि चौथो बर्ष हिँडिरहेको प्रदेश सरकारसँग जनताले बुनेका सपनाहरु र भरोसा अहिलेको अवस्थासम्म आइ पुग्दा कायम छन् ?, या उनीहरुको निर्णय र कार्य ब्यवहारकै कारण ती जनअपेक्षाहरु तुहि सके ? प्रदेश सरकार सञ्चालकहरुको गम्भिर समिक्षा गर्नु पर्दछ भन्दैगर्दा उनीहरुबाट विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका निर्णय, ब्यवहार र परिणामहरुको वस्तुगत विवेचनाबाट सहि निष्कर्षमा पुगिन्छ ।
सबैलाई थाहै छ कि विकास ‘छु–मन्तर’ का बाचा भने जस्तो रातारात हुने होइन् । त्यसैले रातातार सकडहरु बन्नु पर्छ, विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति भएर जनताको जीवनस्तर रातारात कायापलट हुनुपर्छ भन्ने पनि हैन । तर सरकार सञ्चालकहरुको भूमिका कस्तो रह्यो, विधि र पद्दति स्थापित गर्न लय समातियो या मनमर्जी गरियो भन्ने कुरा प्रमुख सवाल हो । त्यसका लागि पनि विगत देखि वर्तमानसम्मका केही आधारभूत घटनाक्रम हेर्यो भने प्रष्ट हुन सहज हुन्छ
मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै माननीय त्रिलोचन भट्टले ‘अब सुदूरपश्चिमवासीहरुले चौकीदारी गर्न भारत गइरहनु पर्ने छैन’ भन्ने घोषणा गर्नु भयो । उक्त घोषणाले प्रदेशवासीहरुमा आशाको संचार गर्यो । तर सरकार चलाएको चौथो बर्ष चल्दै गर्दा भारतका गल्लीमा जानेक्रम घटेको छ ? बरु अहिले त झन् कोभिडको चरम जोखिम मोलेरै भएपनि कामका लागि भारत पस्नेहरुको संख्या बढेको छैन र ? अनि के भयो त परिवर्तन ? घोषणा पछि केही न केही त परिवर्तन हुनु पर्ने हैन र ?
सुरुआती चरणका कुरा छाडौं । शुन्यताबाट सुरु भएको नयाँ संरचना भएकाले त्यो अवधि सिकाईको अवधि भयो मानेर चित्त बुझाऔला । तर समय बित्दै गर्दा उहाँहरुबाट भए गरेका क्रियाकलापहरुले के जनतामा आशा जगाएको छ ? वा वितृष्णा पैदा गरि रहेको छ ? सरकार सञ्चालकहरुले यस विषयमा कहिल्यै गम्भिर भएर सोचेका छन् ? मलाई लाग्छ, उहाँहरुलाई लोकले के भन्छ कुनै मतलव छैन, आत्मरतिमा रमाएर आफैले आफ्नो डम्फु बजाउँदै मख्ख हुनुहुन्छ उहाँहरु ।
आगामी बर्षका लागि ल्याइएको बजेटका केही पाटा र प्रतिक्रिया हेरौं । बजेटको सिद्धान्त, नीति तथा योजना र बजेटका बीच कति मेल बेमेल छ ? बजेट योजनाहरु कुन सिद्धान्त र उद्देश्यले प्रेरित छन् ? वितरण प्रणाली कस्तो रह्यो ? जनताको जीवनस्तरले कोल्टो फेर्न सक्छ ? सुशासन कायम हुन सक्छ ? यी अहिलेका अहं प्रश्नहरु हुन् ।
सीमित बजेटमा असिमित अपेक्षाहरु एकै पटक पुरा गर्न सकिदैन भन्ने कुरा पनि यथार्थ हो । तर प्रदेश सरकारले चार बर्ष हिँड्दै गर्दा र झण्डै एक खर्बको बजेट चलाउँदै गर्दा कस्तो विधि र पद्दति अवलम्वन गर्यो, कति प्रगति हासिल गर्यो, बेथिती घटाउन सरकारले गरेको पहल के हो ? आदी मुख्य सवाल हुन् । यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै गर्दा निराशा मात्र हात पर्छ ।
अहिलेको सरकार र सरकार सञ्चालकहरु चौथो बर्षमा पुग्दा त झन् बेथितीको अखडा सिर्जना भइरहेको छ । दु्रत गतिमा नीति नियम बनाउने र त्यसको इमान्दार कार्यान्वय गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दापनि अहिले आएर त ‘प्रिपेड र पोष्पेड’ भाष्य प्रचलित गराएको छ । संसद देखि गाउँसम्मका सबै तिर, खास गरि पूर्वाधार विकासका योजनाहरु लञ्च गर्न सरकारले सेटिङ परम्पराको विकास गराएको आरोप उनीहरु माथि पेचिलो गरि तेर्सिएको छ ।
समूदायले पहिल्यै वा पछि मन्त्री, उनीहरुको पिए वा पहुँचवाला कर्मचारीलाई निश्चित रकम दियो भने कमाउने योजना पार्न सकिन्छ भन्ने अनौठो मनोभावना विकास भएको छ । जुन सबै भन्दा दुर्भाग्य हो । त्यसको जबरजस्त उदाहरण प्रख्यात भनिने मुख्यमन्त्री भट्टका एकजना पिएले योजना पार्दिन्छु भन्दै गाउँलेबाट अग्रिम रकम लिएको सूचना सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएबाट सरकार सञ्चालकहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
तर विडम्बना त्यति गम्भिर सवालमा पनि मुख्यमन्त्रीले कुनै चासो दिएको पाइएन । बरु उल्टै उहाँको संयन्त्रले ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्यो । अन्य प्रभावशाली मन्त्रीहरुको कार्यशैली र द्रब्यमोहका बारेमा पनि थुप्रै आलोचना र आशंकाहरु गाउँघरमा प्रसस्तै सुनिन्छन् । उहाँहरुलाई लाग्दो हो कोही केही थाहा पाउदैनन्, तर त्यो उहाँहरुको सबै भन्दा ठूला भ्रम हो । धेरैले उहाँहरुका एकएक हिसाव थाहा छन् । त्यसतै परे सब हिसाव एक दिन चुक्ता गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न पनि सकिन्न ।
योजना वितरणको प्रकृया र शैली कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने उदेक लाग्दो अवस्था छ । दिगो विकासका योजनाहरु, योजनावद्ध विकास, योजनाहरुको प्राथमिकीकरणको कस्तो पद्दति बसालियो भन्ने मुख्य सवाल हो । अझ, अहिले सार्वजनिक रुपमै एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीको आलोचना गरि रहेको पनि सुनिन्छ । यसको अर्थ के हो ?
१४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ५ लाख अनि एउटा देवताको मन्दिर निर्माण गर्न एक करोड विनियोजन ? यस प्रदेशको विकासको मुख्य आधार मानिएको खप्तड, रामारोशन, बैद्यनाथ, बडिकेदारका लागि अढाई करोड अनि गाउँमा मठमन्दिर निर्माण गर्न १५ करोड । कम्युनिष्ट सरकारको यो कस्तो विकास दृष्टि वा मोडेल होला ?
यस्ता अनेकौं उदाहरणका फेरिस्त लामै छ । सिचाई कूलो, तटबन्ध निर्माणका अनौठा योजनाहरुको निक्र्यौल कति आवश्यकतामा आधारित र औचित्पूर्ण रुपमा छनोट भएका छन् भन्ने कुराले त झन् दिक्दारी बनाउँछ । चारचार बर्षसम्म दिर्घकालीन विकासको एउटा ठूलो परियोजना बनाउनेमा उहाँहरुको ध्यान किन गएन ? त्यो गरेकोे भए राम्रै रोजगारी पनि त सिर्जना हुँदो हो ।
पहुँचवाला मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बेस्सरी बजेट खन्याएको चर्चा पनि यतिबेला चर्कै छ । यस सवालमा पछाडि परेका जिल्लाहरुले विकास बजेटमा प्राथमिकता पाउनै पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुनसक्दैन । तर प्रसस्त बजेट विनियोजन भयो भन्ने सस्तो प्रचार गर्दैगर्दा त्यसको भित्री पाटोहरु पनि केलाउनै पर्दछ । के ती योजना पार्टी संरचनाको समन्वयमा गएका छन् ? पार्टीले सिफारिस गरेका योजनाहरु परेका छन् ? के प्रदेश निकायका जिल्ला कार्यालयहरुबाट सिफारिस योजनाहरु परेका छन् ? आवश्यकतामा आधारित योजनाहरु कति छन् ? सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुको सिफारिसमा कति योजनाहरु परेका छन् ? जिल्लामा आएका योजनाहरु बारे जिल्लामा रहेका पार्टी नेताहरुको प्रतिक्रिया के छ ? सर्वसाधारणहरु के भन्छन् थाहा छ, प्रिपेड विधिबाट योजना ल्याएको भन्छन् उनीहरु ।
अझ जेठ असारमा आएर मात्रै करोडौ रकम योजना निर्माणका लागि छुट्याउने प्रवृतिले कस्तो विकास गर्न खोजेको होला यो सरकारले ? के यो प्रवृति हटाउनै नसकिने अवस्था हो ? वा कसले गरि रहेको छ यो सब ? कर्मचारीका कारण हो भने ख्वै त जनतालाई भनेको । तर पनि अर्कालाई दोष दिएर आफु उम्किन पाइन्छ भन्ने सोचले अब पत्याइ रहनु पर्दैन ।
अर्को दुर्भाग्य, मुख्यमन्त्री र केही पहुँचवाला मन्त्रीहरु बिचौलियाको घेरामा छन् र मनमर्जी गरि रहेका छन् भन्ने आरोपहरु सत्य सावित हुने अवस्था छ । उनीहरुको बसनउठन को को सँग हुन्छ, उनीहरु कस्ता ब्यक्तिहरुको घेरामा छन् ? उनीहरुका सल्लाहकारहरुको घेरा कस्तो छ ? मञ्चमा उभिएर आकर्षक भाषण गर्दैमा गरिबको भोको पेट भरिन्न र सुदूरपश्चिमको विकासले कोल्टो फेर्न सक्दैन । केही मन्त्रीले बोल्ने भाषण र ब्यवहारका बीच कहाली लाग्दो खाडल छ ।
यस कारण हामीले केन्द्र सरकार माथि विधि, पद्दति, पार्टीका निर्णयहरुमा प्रश्न गरेर असहमति गर्दैगर्दा आफ्नै प्रदेश सरकारले गरिरहेको काम कार्वाहीको विवेचना नहुने हो र प्रदेशकाहरुले गरिरहेको गल्तीलाई संरक्षण गरेको ठहर्छ । त्यति मात्रै हैन, डबल स्ट्याण्डर्ड हुन जान्छ । जो हुनु हुन्न । यसर्थ, अब पार्टी भित्र प्रदेश सरकारले गरि रहेको कामका बारेमा तथ्यका आधारमा गम्भिर समिक्षा जरुरी छ । यस कार्यमा जति ढिलो भयो त्यति क्षति हुन सक्ने जोखिम हुनसक्छ । विधि, पद्दति मिचेर मनमर्जी गर्नेहरुलाई मन्त्री पदमा राखिरहन जरुरी पनि छैन ।
सिद्धान्त प्रतिको निष्ठाका आधारमा भन्दा पनि केही ब्यक्तिहरु पावरमा पुग्न कुनै गुटको फेरो समातेर अनुत्तरदायी कार्य गरिरहेका छन् । त्यस्ता मन्त्रीलाई अब कदापि छुट दिइरहन र च्यापि रहन जरुरी छैन अब । किन कि जनताको भविष्यको कुरा छ । पार्टीको भविष्यको कुरा छ । त्यसैले सरकारले गरिरहेको कामको सवालहरु बारे पनि अब पार्टीले आवश्यकता अनुसार छानवीन गर्नु जरुरी छ । ब्यक्तिगत आलोचनाको कुनै अर्थ छैन । तर जनसवालका सन्दर्भमा न्यायिक सवाल उठाउन जरुरी छ । किन कि कुनै मन्त्री विशेषको बदमासीमा सिंगो पार्टी पंक्ति सती जान सक्दैन । त्यसैले अब पार्टी तहमा निर्मम समिक्षा गर्न ढिलो गर्न हुन्न ।
(लेखक भीम रावल निकट अछामका एमाले नेता हुन् ।)
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, श्रावण ८, २०७८, ०७:५०:००